सेक्सअघि यी चीजहरु नखानुस् है, हानिकारक हुन्छ ! | ''Knowledge Never Ends''
सेक्सअघि यी चीजहरु नखानुस् है, हानिकारक हुन्छ !
विश्वभर सेक्स सधैं एक कौतुहलताको विषय बन्दै आएको छ । सेक्स जीवन सुखमय बनाउने नाममा मानिसहरु जानिनजानी कतिपय अवस्थामा ‘गलत’ तरिका रोज्न पुग्छन्, जसले मानिसको जीवनमै असर पर्न जान्छ ।
राम्रो यौन जीवनका लागि खाद्य पदार्थ (डाइट) को पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । जसरी केही डाइटहरुले मानिसको कामोत्तेजना बढाउँछन् भने केही तत्वहरु छन्, जसले मानिसको कामोत्तेजना ह्रास गर्छन् ।
यौन सम्बन्ध अगाडि यी तत्वहरुको सेवनले मानिसको ‘परर्फमेन्स’मा विपरित प्रभाव पर्न सक्छ ।
इनर्जी ड्रिंकः इनर्जी ड्रिंकले कामोत्तेजना बढाउँछ भन्ने भ्रममा कहिल्यै नपर्नुस् । इनर्जी ड्रिंकको सेवनबाट मानिसले उर्जावान त भएको महशुस गर्छन् । तर, यसमा बढी मात्रामा चिनीजन्य पदार्थ हुन्छ, जसले शरीरमा ‘टेस्टोस्टेरोन’का स्तर घटाउँछ ।
यस भन्दा राम्रो घरमै बनेको चिनीको मात्रा कम हुने फलफूलको जुस सेवन गर्दा उत्तम हुन्छ । जसले मानिसको इनर्जी कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
बट्टाभित्र हुने खाद्य पदार्थः सेक्स अगाडि बट्टाभित्र ‘प्याकिङ’ भएको खाद्यपदार्थ सेवन गर्दा पनि नकारात्मक असर गर्न सक्छ । यस्ता खाद्यपदार्थमा सोडियम अधिक हुने गर्छ । जसले शरीरको पाचन क्षमतालाई असर पुर्‍याउँछ नै, यसले सेक्स हर्मोन पनि घटाउँछ ।
त्यसैले यस्ता खाद्यपदार्थ सेवन नगर्दा नै उत्तम हुन्छ ।
– एजेन्सीको सहयोगमा ।
← Hindi Film “Boss” watch here full video
Adaalat 21st December 2013 Watch Here →